LG V60 ThinQ ga-enwe ihu abụọ | Gam akporosis
Otu izu gara aga ekwuputara na LG ga-adi na IFA 2019. Thedị ndị Korea ga-eweta ụdị ọhụụ na ihe omume na Berlin, na-egosi ọzọ otu n'ime ekwentị ndị a ga-enwe ihu abụọ. Companylọ ọrụ ahụ na-ebipụta teaser ọhụrụ ugbu a, ebe ekwenyesiri ike na anyị nwere ike ịtụ anya ihe atụ nwere ihu abụọ maka akụkụ ya. Ihe niile na-egosi na ọ ga-abụ LG V60 ThinQ.
Na vidiyo ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ebipụtala na netwọkụ anyị nwere ike ịhụ ọdịdị nke ngwaọrụ nwere ihu abụọ. Ihe anyị na-amaghị bụ ma LG V60 ThinQ a ga-enwe ihu abụọ ma ọ bụ ngwa ejiri, dị ka nke rutere na February na V50. Ọ bụ otu n'ime obi abụọ ndị edobebeghị.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụ ngwa, ma ọ dịkarịa ala, a na-egosi nke a, mana ọ nweghị nkwenye gọọmentị 100% rue ugbu a. Mana o doro anya na LG na-etinye aka na ihuenyo abụọ, dịka ọ ga-eme na LG V60 ThinQ ae chere. Eyinom yɛ mfonini a edi m as.
Lee ozi na Instagram
_ Dual the Better 9 월 6 일, 더 새로 워진 듀얼 스크린 을 만나 보세요. Zọpụta Datebọchị! - # Coming_Soon # IFA2019 #NEW #LGsmartphone
Ekekọrịta òkè site na LG Mobile Korea (@lgmobile_kr) ihe Ọgọst 11, 2019 na 6: 02 am PDT
O doro anya ụdị ngwa nwere ike ịbụ ewu ewu n'ahịa. Ha na-enye gị ohere ịmatakwu ojiji na ekwentị, n'ụdị ọnọdụ niile, dị ka mgbe ị na-egwu egwuregwu. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ekwentị dị ike, na-agbaso usoro nke ihe nlereanya ahụ gosipụtara na February nke afọ a.
N'ọnọdụ ọ bụla, ichere ruo mgbe LG V60 ThinQ a ga-abịa dị mkpụmkpụ. Ebe ọ bụ na Korean ika ngosi omume ẹkenịmde ke mbido Septemba na IFA. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị na nke a, ebe ha kwere nkwa ịhapụ anyị na ọtụtụ ngwaọrụ na ya.
Ya mere, anyị ga-elebara anya ozi ohuru banyere ihe omume a na LG V60 ThinQ enwere ike. Thedị Korea kwesịrị ịkwalite nsonaazụ ya na ahịa, yana ahịa na-aga n'ihu ịbelata ugbu a. Ya mere ụdị ekwentị ndị a nwere ike ịbụ ezigbo mmụba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG V60 ThinQ ga - abata na ihu onyunyo
Geekbench enyochala Qualcomm's Snapdragon 665
Redmi 6 na Redmi 6A melite gam akporo achịcha